Amashiya angwevu - Ndingawafihla njani | Bezzia
Amanyathelo okufihla iinwele ezingwevu kumashiya
USusana godoy | 15/06/2022 12:00 | Ubuhle
Ngaba ufuna ukufihla iinwele ezingwevu kumashiya akho? Emva koko sinoluhlu lwamaqhinga ekufuneka uwasebenzise. Kuqhelekile ukuba ngenye imini, ngelixa sidiliza le ndawo, sibone indlela ezinye iinwele ezimhlophe ezithathe ngayo. Lixesha lokuba wenze into ukwenza ibrow yonke ibonakale umbala omnye ofanayo.
Kutheni ndineenwele ezingwevu kumashiya am? Ngenxa yokulahleka okuqhubekayo kwe-melanin, siqala ukubona iinwele ezimhlophe. Kodwa hayi kumashiya kuphela kodwa neenwele ngokuqinisekileyo ziya kuba nazo. Akufanele ukhathazeke kuba kusoloko kukho uthotho lwamanyathelo kunye neengcebiso onokuthi uzisebenzise ngokukhawuleza. Fumana yonke into esiyizisayo!
1 Fihla amashiya angwevu nge makeup
2 umbala wamashiya
3 Amayeza asekhaya amashiya angwevu
Fihla amashiya angwevu nge makeup
Njengoko usazi, i-makeup yenye yoncedo olukhulu esinokulufumana. Kuba ukuba imalunga nokuzenzisa, iya kuwuzalisekisa umsebenzi wayo. Ewe kufuneka sisoloko sikhetha ezona mveliso zigqwesileyo, kunye nezo zithe ngqo. Kule meko unokufumana ipensile yeshiya okanye, kunye ne-makeup nayo ihloselwe amashiya. Ukuba uneebhrawu ezikhanyayo, ke kungcono ukhethe ipensile okanye umbala okhaphukhaphu kancinci kunomthunzi webrows yakho..
Ngexesha ukuba uneenwele ezimnyama kakhulu ke hamba umthunzi okanye ezimbini zibe mnyama nangakumbi. Xa uyikhethile, kufuneka udibanise kakuhle amashiya ukuze umbala uhlakazwe ngokulinganayo. Uzakuzoba imigca yamashiya akho kwaye uwagcwalise ngononophelo. Okokugqibela unokuzinceda ngebrashi. Oku kufuneka kulunge kakhulu, ukuze kube nokuchaneka ngakumbi. Unokwenza okufanayo ngepensile kwaye emva koko ugcobe kancinci ngebrashi. Ingcamango kukuba indawo igutyungelwe kodwa kunye nokugqitywa kwendalo.
Kanye njengoko sinodayi ukuze sikwazi ukubonisa imibala eyahlukeneyo kwizinwele zethu, kwimeko yamashiya kukho ezinye ezikhethekileyo. Ngale ndlela unokufihla iinwele ezimhlophe ngokuqhwanyaza kweliso. Ewe ngokunjalo, musa ukudaya amashiya ngedayi yeenwele, kuba unokuba nokucaphuka kwindawo. Ke, kufuneka uthenge idayi ethile kwaye ulandele imiyalelo yayo. Ezi zidla ngokuzisebenzisa kwicala lokukhula kweenwele, kodwa kwelinye icala. Ngale ndlela siqinisekisa ukuba yonke into igutyungelwe kakuhle. Siza kulinda ngaphantsi kwemizuzu eyi-10 kwaye yiloo nto. Kukho izindlu ezininzi ezinedayi zamashiya kwaye ezinye zazo sele zinemveliso echanekileyo ngendlela yeepensile ukwenza inkqubo ibe lula.
Amayeza asekhaya amashiya angwevu
Kwelinye icala unokwenza i-chamomile njengesiqhelo. Xa sele kubanda, kuya kufuneka udibanise amacephe amane awo kunye ne i-pinch ye-turmeric (incinci ngaphantsi kwesiqingatha sesipuni). Ngoku, siya kuxuba kakuhle kwaye iya kuba ilungele ukusetyenziswa. Ngokuqinisekileyo, kungcono ukuyenza ngebrashi. Ushiya kuphela malunga nemizuzu emi-5 kwaye uhlambe ngamanzi.
Sebenzisa ezinye ukufakwa kweti emnyama Iyasebenza. Kuba lo unebala eliza kufihla iinwele ezingwevu. Kodwa kuyinyaniso ukuba lolokwexeshana.
ikofu kunye ne-cocoa sesinye sezithako ezinkulu esizixubayo zinokunika amashiya ethu loo mbala umnyama, esithi ndlelantle kwizinwele ezimhlophe. Kufuneka ibe yikhofi emnyama kunye ne-cocoa powder kunye nayo yonke into exutywe kakuhle. Ukuba umxube uphuma ngamanzi kakhulu, ngoko unokongeza ubusi obuncinane. Ngayo uya kubona indlela enamathela ngayo ngcono kakhulu eluswini lwakho.
Njengoko uyazi, zonke ezi maqhinga ziya kunika umbala kwizinwele, kodwa ngokusengqiqweni aziyi kuhlala. Kunokutshiwo ngokulula ukuba baya kufezeka ukuze baphume engxakini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Amanyathelo okufihla iinwele ezingwevu kumashiya
Kutheni besithi iikati zinobomi obu-7?
I-imeyile yokuthengisa, isixhobo esibalulekileyo kwishishini lakho